I-Villa Magia d 'Estate - I-Airbnb
I-Villa Magia d 'Estate
Bugnara, Abruzzo, i-Italy
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Serena
I-Villa Magia d 'Estate itholakala e-Bugnara (AQ), enye yezindawo ezinhle kakhulu e-Italy, emasangweni e-Abruzzo National Park. Ihlotshiswe emvelweni, phakathi kwe-Peligna Valley ne-Gettarius Valley, ijabulela ukubuka okumangalisayo kwe-Majella ne-Mount Morrone enhle.
Kungamakhilomitha angu-4.5 ukusuka enkabeni engokomlando ye-Sulmona, idolobha lobuciko kanye nesikhungo esibalulekile sezivakashi.
I-Villa Magia d 'Estate isesimweni esifanele sokufinyelela ezikhangayo eziyinhloko zemvelo zase-Abruzzo, inhliziyo eluhlaza yase-Europe.
I-villa, enefenisha egcwele ifenisha yesimanje nezinto zakudala, yakhelwe ngaphezu kwamazinga angu-3:
1) Indawo yaphansi:
igumbi elikhulu lokuphumula elinekhishi, ukukhanya ne-Dolby surround sound system, iphrojektha/i-TV, indawo yokubasa umlilo kanye nama-billiards; ukufinyelela ngokuqondile kuvulande omkhulu nengadi enkulu.
2) Isitezi sokuqala:
-igumbi elihle elinekhishi negumbi lokuphumula;
-igumbi lokugezela elinazo zonke izindlu zangasese nobhavu;
- igumbi "elibomvu" elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa, ifenisha egcwele, ithelevishini kanye nokufinyelela endaweni enkulu eyakhiwe ngamapulangwe;
- igumbi "lakudala" elinombhede olala abantu ababili, ifenisha egcwele, ithelevishini, usofa kanye nokufinyelela endaweni enkulu eyakhiwe ngamapulangwe;
- indlu yokugezela enazo zonke izindlu zangasese, usinki olala abantu ababili kanye ne-shower cubicle;
- igumbi lokuhlanza izingubo elinomshini wokuwasha, i-ayini, ibhodi loku-ayina neloku-ayina kanye nokufinyelela endaweni enkulu eyakhiwe ngamapulangwe (ukusetshenziswa kwekamelo lokuhlanza izingubo kugcinelwe ukuhlala okungaphezu kwezinsuku ezingu-4).
3) Isitezi sesibili:
ikhabethe elivulekile elinosofa, umbhede olala abantu ababili, umbhede oyisitezi kanye nombhede olala abantu ababili.
Wonke amafasitela e-villa anezinetha zomiyane nezimnyama.
umbhede oyidabulu engu- 1, Umbhede ongu-1, 1 umbhede oyidabuli omncane
ubusuku obungu-7 e- Bugnara
Indawo ithule kakhulu futhi isendaweni enobuhlakani uma iqhathaniswa nazo zonke izindawo ezithakazelisayo zendawo.
I-villa ayihlukanisiwe yize ingene shi emvelweni; isango lokungena lisemgwaqeni ontofontofo.
Ngizozama ukuba khona lapho izivakashi zifika futhi ngizohlale ngitholakalela phakathi nokuhlala kwazo. Kuyatholakala ukunikeza imininingwane edingekayo yempumelelo yokuhlala okuhle nokuthola indawo yethu enhle.
Inombolo yepholisi: 066012B&B0003